CFM – Fifidianana: “Mila fakafakaina ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy” | NewsMada
CFM – Fifidianana: “Mila fakafakaina ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy”
“Tokony hofakafakaina lalina dia lalina izy io, satria raha mitranga sy mitohy: loza mitatao ho any demokrasia, izay mbola tanora sy marefo dia marefo eto amintsika.”, hoy ny filohan’ny CFM, i Maka Alphonse. Maro ny anton’izany, tsy tokony hodian-tsy hita fa saika manerana an’i Madagasikara. Na ho an’ny mpanao politika izay, na mpitondra fanjakana, na ny firaisamonina sivily, na ny olom-pirenena tsotra… Na izany aza, ekena ho ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna amin’izay misy azy avy izay voafidy eo.
Misarika ny sain’ny besinimaro sy ny mpanao politika, indrindra ny mpitondra na ny mpanohitra, àry izay mba hieritreritra ny amin’izay taham-pahavitrihan’ny mpifidy ambany dia ambany amin’ny fifidianana izay, fa tsy fahita loatra hatramin’izay.
Andrasana amim-pitoniana ny voka-pifidianana
“Mamerina, voalohany, ny tokony hitandrovantsika toy ny anakandriamaso ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny fanjakana”, hoy izy. Faharoa, manao antso avo hatrany ny CFM sy ny mpiara-dia aminy mba hanajan’ny rehetra ny fitoniana sy fandriampahalemana ary firahalahiana ao anatin’ny fihavanana. Fahendren’ny razana efa nasehony hatramin’izay. Hiandry amim-pitoniana izay voka-pifidianana ofisialy havoakan’ireo sampandraharaham-panjakana misahana izany ny rehetra.
Tsy misy hahazo tombony amin’ny savorovoro sy ny krizy, fa ny fahavalo no hahazo tombony amin’izany. Aoka hanajana ny lalàna velona mamaritra ny hamoaka ny voka-pifidianana. Eo koa ny voafaritra anaovana fitarainana, raha misy ny fandikan-dalàna.